Market maka mgbo na-àmà Glass Windows
Isiokwu:bullet-àmà windo enyo
Site: May Anokuru October 25, 2011
Ajụjụ: M na-eleta Nigeria ugboro abụọ. My azụmahịa na-akpakọrịta ka bi na obodo gị - A mara mma ma na-ele ọbịa ebe. Biko mee ka m mara ma ọ bụrụ na e nwere ahịa bullet-àmà windo enyo na Nigeria. Ọ bụ ezie na ugbu a azụ ke China, m na-akpakọrịta ga-ekiri gị omume. – yi Qian
Daalụ maka ọmarịcha okwu banyere Nigeria. M na-atụ ndị ọzọ gaje investors na mba ga-ekwenyesi ike nke a na-ahụ na nke a bụ ebe mara nnọọ mma, na na-abụghị kpọmkwem otú ọ na-'ese' ụfọdụ ebe. M họọrọ a nzaghachi ajụjụ gị site na nke a na-ajụ (n'ihu ọha) n'ihi na spade nke yiri ase site n'èzí ndị a mben, na gị na-akpakọrịta, onye m kwere ka bi na-azụ ahịa ebe a (dị ka ị na-egosi) na-enwe ohere na-erute ya, ọbụna ma ọ bụrụ na ọ gụnyere ịgụ isiokwu a na peeji nke gị oriri, digitally, na China.
Wezụga na-agba gị na-akwado ihe ị ga-ezute na nke a mpempe ka m omume na a gara 'azụmahịa ngalaba' nke Nigeria Embasii Beijing; ma ọ bụ Nigeria Kọnsụlet General , na Hong Kong (ma ọ bụrụ na ị na-adịghị dabere na Chile China), Adịghị m denye aha gị "mgbe a batara" a ahịa enweghị mbụ anwale n'ala.
Nke a dị na akara na a okwu na a clime na, "Ị dịghị tụọ ịdị omimi nke a osimiri na ma ụkwụ". Nke a na-agụnye onye mbụ mgbalị na a mbara Marketing Intelligence mmega (M atụ anya ka ị na-emegharị a na 'ahịa nnyocha', dị ka ma na-abụghị otu). M nwere otu echiche banyere yiri n'ihi nke ndị dị otú ahụ, ma m na-ala azụ ime ya, dị ka m na-amaghị kpọmkwem anam elu nke gị ngwaahịa, tinyere ya nkwado dị ka a nche item.
Marketing Intelligence-enyere gị nke ọma 'na-eche na usu' nke ahịa n'ihi na oge mbụ, na-agụnye set nke usoro na isi mmalite, i nwere ike ahu nagide iji nweta elu-ụbọchị ọmụma banyere ọpupu-on a ahịa gburugburu ebe obibi. Ọ ga n'ezie na-aghọta dị ka a '-acha anụnụ anụnụ na-ebipụta' ka àjà a 'mma ọdịda' ma na-nri mbụ nzọụkwụ kwupụta mwube a azụmahịa nke na-enye na ahịa bullet àmà iko windo Nigeria.
N'ihi na enwe mmetụta ọsọ ọsọ ọdịdị nke gị ngwaahịa na yiri nche pụtara, M ga na-machibido m omume ebe a iji na-eduzi gị site na a nchịkọta (n'okpuru) ihe Marketing Intelligence mgbalị ga-abụ na ịkọwa, inyere gị irè mkpebi banyere nke a ahịa. Na-eche free ịkpọtụrụ m ma ọ bụrụ na ị na-achọ ihe ọzọ nkọwa ọ bụla akụkụ nke nchịkọta ebe a, na ọbụna obodo uwe nwere ike inyere gị aka ọbọ a:
Nke a gụnyere ihe nkejikotara importation chọrọ na ndị ọzọ ebubo ịtụbata bullet àmà iko Ibé akwụkwọ; azụmahịa gị (ma ọ bụ ya nnọchiteanya) ndebanye na Corporate Affairs Commission (CAC); a ụdị nke aha na Nigeria Police – The bụkwanụ ebe a bụ na-ekwe nkwa na ọ bụ nanị na-achọsi ike ahịa ịzụrụ nke ngwaahịa; njirimara na ndebanye aha gị staffers (ahụ maka nke mwute ọrụ), wdg.
Product atụmatụ (nkọwa)
Ọ gị bullet àmà iko (iche si yiri osisi) nkejikotara atụmatụ na ndịiche ndị a, banye ahịa?:- Multiple n'ígwé kpara ballistic ọkwa faiba glaasi ákwà, Thermo-ịtọ polyester resin, ma ọ bụ ka nke polycarbonates; ma ọ bụrụ na ngwaahịa ga-dị ka ewepụghị Ibé akwụkwọ, mgbe e mesịrị ịkpụ aka chọrọ nha na shapes (dabeere na ahaziri iwu); ma ọ bụrụ na ngwaahịa bụ bụghị n'okpuru etoju 2 ma ọ bụ 3 bullet eguzogide faiba glaasi; nso nke ballistics eguzogide ma ọ bụ ihe nchebe na-etoju 2 ka 8. Ma ọkpụrụkpụ ga mbio 5/16 sentimita 7 / 16inches; ibu, si 3.6lbs kwa sq. ft. ka 4.9lbs kwa sq ft; mgbe mpempe akwụkwọ size, 3ft. x 8ft. ka 4ft. x 8ft.
The mgbalị na ahịa ọgụgụ isi ga-enyere chọpụta ma ọ bụrụ na dị ewepụghị Ibé akwụkwọ nwere ike ebipụ kpọmkwem nha ebe a, mgbe e mesịrị kpọkọtara ona ahịa 'chọrọ (e.g. na-ahụkarị windo akụkụ ebe a nke 6ft x 4ft; 4ft x 4ft; na 3ft x 3ft. - dị ka ịkpụ , nke a dị ka isi nha). Ọ bụrụ na mbata na ọpụpụ iwu na-enye ohere maka ọrụ nke Chinese technicians, ebe ịcha na assemblage nke a ihe bụ kpere a pụrụ iche na usoro, tinyere ya nche pụtara. Ma ọ bụ ikike na ojiji nke obodo technicians (anakwereghị Nsukka) n'ihi nzube a.
Space ebe a na-adịghị ekwe ka ihe ndị ọzọ kwuru na ndị ọzọ mmiri nke ihe ị ga-ele anya maka na Marketing Intelligence mgbalị, Otú ọ dị akụkụ ndị ọzọ ị na-achọ itinye na-: Akporo nke Market (Size na ịta nke ahịa agba); Aga price etoju; Esịtidem nkesa mmiri; Nnweta intermediaries; Mode nke nkwalite; mpi àjà (Na-eme na adịghị ike); mgbe m na-enye ụfọdụ dị mkpa mma na akowa nke ndị ahịa / ngwaahịa ikpughe na Ịnakwere.
Qian, aga site na ihe ị nwere ike ghọtara banyere ndị na-eme na Nigeria (e.g. spade nke nche Udo, eme nke dissenting iche iche, wdg), M na-ahapụ gị ka ị ma ọ bụrụ na gị ngwaahịa ga-mkpa n'oge a, ma ọ bụ ọ bụghị. Ọbụna ebe ị 'na-agụ n'etiti edoghi', M bu n'obi abụghị-eji empt ọ bụla pụta gị ahịa ọgụgụ isi nọ n'ógbè Ahịa ma ọ bụ Product Exposure na Ịnakwere. Ka m na-eduzi gị echiche , mee ka gị na nkwenye na-enye ohere maka ihe omumu ikpughe ahịa ọnọdụ (na ekele na-eji ọkụ), ka: Government-ekesịpde ụlọ ọrụ; na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọrụ ejiri; n'elu ụlọọrụ uloru, mmiri; ibu-na ahịa ma ọ bụ n'ji ngwongwo retail outlets; na ego ugwo ihe.
N'agbanyeghị nke pụtara ile ọbịa nke Nigerians, biko na-adịghị-iwu nke ebe nyere site 'agafe akara'. A compatriot nke gị, Wang Richard, na ya na-akpakọrịta, Fong Chiu Your (a Taiwanese) mere otú na 450.4kg nke dị cocaine (uru 4.2 ijeri naira) na nso nso, na na aturu mkporo maka 15 afọ. E nwere ọtụtụ ụlọ maka ziri ezi mba ọzọ ọchụ ntá ego na Nigeria. Gbalịa na-eme ka ndị kasị mma nke a ohere. Malite oyi na ihe m kwuru ebe a. Ị ka nwere ike ịkpọtụrụ m na ihe ọ bụla nke na-eke ndị ahịa gị bullet-àmà windo enyo. na atụmanya, Na m ekele unu na Nigeria.
1 Comment on "Market maka mgbo na-àmà Glass Windows"
Aisak adeniyi | August 14, 2015 na 7:56 pm | Zaghachi
wat d eri nke a bullet àmà iko
Marketing nke mgbo-Gosiri Ihe: The Chineke lekọtara